မြန်မာဆိုတာ ကမ႓ာ့က လူသိများလာအောင် မြန်မာ့ဓလေ့ရိုးရာ သူငယ်တော်ဝတ်စုံနဲ့ဖော်ပြတော့မယ့် MISS UNIVERSE MYANMAR သူဇာဝင့်လွင် - Channel Lover
ပရိတ္သတ္ႀကီး ေရ…ဘယ္ေတာ့ မွလဲက် မသြားဘဲ ပစ္လိုက္တိုင္းေထာင္ေ နတဲ့ ျမန္မာ့ရိုးရာ ကစားစရာ အ႐ုပ္ေလး ပစ္တိုင္းေထာ င္ရဲ့အႏွစ္သာ ရကို ဒီႏွစ္ရဲ့ Miss Universe စင္ျမင့္ထ က္မွာ ျမန္မာ ကိုယ္စားျ ပု အလွမယ္ သူဇာဝင့္လြင္က ေဖာ္ျပေတာ့မွာပါ။ ရည္ရြယ္ခ်က္ေ ကာင္းေတြ ရွိတဲ့ဒီအ႐ုပ္ေလးကို ျမန္မာတင္မက ကမၻာကပါ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး စိတ္ဝင္စားမႈ ခံရေတာ့မွာ အေသအခ်ာပါပဲ။ ဒီဝတ္စုံေလးကို National Costume အျဖစ္နဲ႔ ပြဲထုတ္ ဖို႔စီစဥ္ထားေပမယ့္ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ Candy လက္ထဲ မေရာက္လာေသးပါဘူး။
ဒီအေၾကာင္းကို လည္း ” ၅.၅. ၂၁ – DHL Agent မွ ရန္ကုန္တြင္ပစၥည္းလာယူ ၆.၅. ၂၁ – ရန္ကုန္မွ ျမဝတီသို႔ပို႔ေဆာင္ ၇.၅. ၂၁ – ျမဝတီမွ မဲေဆာက္ သို႔ပို႔ေဆာင္ ၈.၅. ၂၁ – မဲေဆာက္မွ DHL ျဖင့္ အေမရိကန္နိုင္ငံ သို႔စတင္ပို႔ေဆာင္ ၉.၅. ၂၁ – ဘန္ေကာက္ – ေဟာင္ေကာင္ – ဂ်ာမဏီ မွတစ္ဆင့္ နယူးေယာက္ သို႔ေရာက္ရွိ ၁၀.၅. ၂၁ – နယူးေယာက္တြင္ ၾကားျဖတ္ထုတ္ယူၿပီး လူကိုယ္တိုင္ ဖေလာ္ရီဒါသို ႔ပို႔ေဆာင္နိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မူလလိပ္စာေပးထားသည္မွာ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပရာ ဖေလာ္ရီဒါ လိပ္စာျဖစ္သျဖင့္ ၾကားျဖတ္ထုတ္ယူ၍မရေၾကာင္းသိရွိရ၊
ယေန႔ည ၉ နာရီ ေလယာဥ္ျဖင့္ တင္ေပးလိုက္မွာျဖစ္တဲ့ အတြက္ သူတို႔ပို႔တာကိုမေစာင့္ဘဲ ဖေလာ္ရီဒါ႐ုံးတြင္ ကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္ထုတ္ယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းညႇိုႏွိုင္းေဆာင္ရြက္ ၁၁.၅. ၂၀ – ဖေလာ္ရီဒါတြင္ သြားေရာက္ထုတ္ယူရာ၌ မေရာက္ေသးေၾကာင္းသိရ၊ နယူးေယာက္႐ုံး သို႔ထပ္မံစုံစမ္းရာ ပစၥည္းေရာက္မလာေသးေၾကာင္းသိရ၍ ေလဆိပ္သို႔ လိုက္သြားၿပီး အက်ိဳးအေၾကာင္းအားရွင္းျပ၍ စုံစမ္းညႇိႏွိုင္းရာ ေလဆိပ္ကြန္တိန္နာထဲသို႔ေရာက္ေနေၾကာင္း
ယခု ညေလယာဥ္ျဖင့္ ပို႔ေဆာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားသျဖင့္ ဖေလာ္ရီဒါတြင္သြားေရာက္ထုတ္ယူရန္ အဆင္သင့္ေစာင့္ဆိုင္းလၽွက္ရွိ ၁၂. ၅. ၂၀ – ေလယာဥ္ႏွင့္ ပါ မပါ စုံစမ္းရာတြင္ နယူးေယာက္မွာ ပင္ရွိေနေသးေၾကာင္း သိရသည့္အတြက္ အခ်ိန္မီမေရာက္ရွိပါက အစားထိုးဝတ္ဆင္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ဝတ္စုံရရွိေရးႏွင့္ လူၾကဳံထည့္ေပးနိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္လၽွက္ ရွိပါသည္။ ” ဆိုၿပီး Miss Universe Myanmar Organization က ေျဖရွင္းထားခဲ့ပါတယ္။
ဒီဝတ်စုံနဲ႔ပတ်သက် တဲ့ရည်ရွယ်ခေၾက် ကာင်းတွေကို Miss Universe Myanmar သူဇာဝင်႕လွင် ကလည်း ” ပစ်တိုင်းေထာ င်႐ုပ်ဟာ စက္ကူကို အခြေခံပြီးပြဳလု ပ်ထားပါတယ် လုံးဝန်း တဲ့သဏ္ဍာန် ကိုယ်ထည် အခြေပိုင်းကို ပိုမိုကြီးမားစေပြီး မၾက်ႏွာပြင်ကို ဖို မ ခွဲ ခြားပြီး ေရးဆွဲေ လ့ရွိကြပါတယ် ပြိဳင်ပွဲဝင် ဝတ်ဆင်ထားေ သာဝတ်စုံမွာ သူငယ်ေတာ်အက ကရာတွင် ဝတ်ဆေင် သာ ဝတ်စုံပြည်႕ဖြစ်ပါသည်။ ရွွေလက်ေကာက်၊ ရွွေခြေကျင်း၊ ရွွေဒင်္ဂါး ဆွဲကြိဳးႏွင်႕ကရဝိတ် ခြေနင်းေတာ်တို႔ကို ဝတ်ဆင်ထားပြီး ဆံပင်ကို ဆံရစ်ဝိုင်း ဆံႏွစ်ခွ ၿဂိဳေစာင်းတွင် စည်းထားပါသည်၊၊
ပစ္တိုင္းေထာင္ အ႐ုပ္ေလးရဲ့ ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ လဲက်သြားတိုင္း ျပန္လည္ေထာင္မတ္နိုင္သလို ဘယ္လို အေျခအေနမ်ိဳးမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ခ်က္ခ်င္း ျပန္လည္႐ုန္းထ နိုင္တဲ့ ျမန္မာတို႔ရဲ့ စိတ္ဓာတ္ႀကံ့ခိုင္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္ ရည္ညႊန္းခ်င္ေသာေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ Miss Universe Myanmar ရဲ့ အမ်ိဳးသားဝတ္စုံအျဖစ္ ဂုဏ္ယူစြာ ေဖာ္ျပတင္ဆက္လိုက္ပါတယ္ ရွင္ ” ဆိုၿပီး ရွင္းျပလာခဲ့ပါတယ္။
ျမန္မာ့ရိုးရာ ဝတ္စုံတစ္ခုျဖစ္တဲ့ သူင ယ္ေတာ္ဝတ္စုံနဲ႔ ျမန္မာ့ရိုးရာ အ႐ုပ္ တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ပစ္တိုင္းေထာင္ ေလးတို႔ရဲ့ ပူးတြဲ တင္ဆက္မႈကို Miss Universe စင္ျမင့္ထက္မွာ ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သားအားလုံးက ျမင္ေတြ႕ခ်င္ၾကပါတယ္။ ဝတ္စုံအခ်ိန္မီေရာက္သြားၿပီး ျမန္မာတို႔ရဲ့ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ ရိုးရာေဓ လ့ေတြကို ကမၻာ့အလယ္မွာ ခ်ျပနိုင္ဖို႔လည္း အားလုံးကေမၽွာ္လင့္ေနၾကပါတယ္။
Candy ရဲ့ႀကိဳးစားမႈကေတာ့ မ်က္စိမွိတ္ၿပီးယုံ ၾကည္ရနိုင္တာမို႔ ဝတ္စုံေလး အခ်ိန္မီေရာက္ သြားၿပီး ပြဲမွာအဆင္ေျပေျပနဲ႔ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈကို အေကာင္းမြန္ ဆုံးခ်ျပနိုင္ပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးပါတယ္။ဖတ္ရႈေပးတဲ့ပရိတ္သတ္ႀကီၚကိုအထူးပဲေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္…။
ပရိတ်သတ်ကြီး ရေ…ဘယ်တော့ မှလဲကျ မသွားဘဲ ပစ်လိုက်တိုင်းထောင်ေ နတဲ့ မြန်မာ့ရိုးရာ ကစားစရာ အရုပ်လေး ပစ်တိုင်းထော င်ရဲ့အနှစ်သာ ရကို ဒီနှစ်ရဲ့ Miss Universe စင်မြင့်ထ က်မှာ မြန်မာ ကိုယ်စားြ ပု အလှမယ် သူဇာဝင့်လွင်က ဖော်ပြတော့မှာပါ။ ရည်ရွယ်ချက်ေ ကာင်းတွေ ရှိတဲ့ဒီအရုပ်လေးကို မြန်မာတင်မက ကမ္ဘာကပါ အသိအမှတ်ပြုပြီး စိတ်ဝင်စားမှု ခံရတော့မှာ အသေအချာပါပဲ။ ဒီဝတ်စုံလေးကို National Costume အဖြစ်နဲ့ ပွဲထုတ် ဖို့စီစဉ်ထားပေမယ့် လက်ရှိအချိန်ထိ Candy လက်ထဲ မရောက်လာသေးပါဘူး။
ဒီအကြောင်းကို လည်း ” ၅.၅. ၂၁ – DHL Agent မှ ရန်ကုန်တွင်ပစ္စည်းလာယူ ၆.၅. ၂၁ – ရန်ကုန်မှ မြဝတီသို့ပို့ဆောင် ၇.၅. ၂၁ – မြဝတီမှ မဲဆောက် သို့ပို့ဆောင် ၈.၅. ၂၁ – မဲဆောက်မှ DHL ဖြင့် အမေရိကန်နိုင်ငံ သို့စတင်ပို့ဆောင် ၉.၅. ၂၁ – ဘန်ကောက် – ဟောင်ကောင် – ဂျာမဏီ မှတစ်ဆင့် နယူးယောက် သို့ရောက်ရှိ ၁၀.၅. ၂၁ – နယူးယောက်တွင် ကြားဖြတ်ထုတ်ယူပြီး လူကိုယ်တိုင် ဖလော်ရီဒါသို ့ပို့ဆောင်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ရာတွင် မူလလိပ်စာပေးထားသည်မှာ ပြိုင်ပွဲကျင်းပရာ ဖလော်ရီဒါ လိပ်စာဖြစ်သဖြင့် ကြားဖြတ်ထုတ်ယူ၍မရကြောင်းသိရှိရ၊
ယနေ့ည ၉ နာရီ လေယာဉ်ဖြင့် တင်ပေးလိုက်မှာဖြစ်တဲ့ အတွက် သူတို့ပို့တာကိုမစောင့်ဘဲ ဖလော်ရီဒါရုံးတွင် ကိုယ်တိုင် သွားရောက်ထုတ်ယူမည် ဖြစ်ကြောင်းညှိုနှိုင်းဆောင်ရွက် ၁၁.၅. ၂၀ – ဖလော်ရီဒါတွင် သွားရောက်ထုတ်ယူရာ၌ မရောက်သေးကြောင်းသိရ၊ နယူးယောက်ရုံး သို့ထပ်မံစုံစမ်းရာ ပစ္စည်းရောက်မလာသေးကြောင်းသိရ၍ လေဆိပ်သို့ လိုက်သွားပြီး အကျိုးအကြောင်းအားရှင်းပြ၍ စုံစမ်းညှိနှိုင်းရာ လေဆိပ်ကွန်တိန်နာထဲသို့ရောက်နေကြောင်း
ယခု ညလေယာဉ်ဖြင့် ပို့ဆောင်မည် ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားသဖြင့် ဖလော်ရီဒါတွင်သွားရောက်ထုတ်ယူရန် အဆင်သင့်စောင့်ဆိုင်းလျှက်ရှိ ၁၂. ၅. ၂၀ – လေယာဉ်နှင့် ပါ မပါ စုံစမ်းရာတွင် နယူးယောက်မှာ ပင်ရှိနေသေးကြောင်း သိရသည့်အတွက် အချိန်မီမရောက်ရှိပါက အစားထိုးဝတ်ဆင်ယှဉ်ပြိုင်ရန် ဝတ်စုံရရှိရေးနှင့် လူကြုံထည့်ပေးနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်လျှက် ရှိပါသည်။ ” ဆိုပြီး Miss Universe Myanmar Organization က ဖြေရှင်းထားခဲ့ပါတယ်။
ဒီဝတျစုံနဲ့ပတျသကျ တဲ့ရညျရှယျခကြျေ ကာငျးတှကေို Miss Universe Myanmar သူဇာဝငျ့လှငျ ကလညျး ” ပစျတိုငျးထော ငျရုပျဟာ စက်ကူကို အခွခေံပွီးပွုလု ပျထားပါတယျ လုံးဝနျး တဲ့သဏ်ဍာနျ ကိုယျထညျ အခွပေိုငျးကို ပိုမိုကွီးမားစပွေီး မကြျနှာပွငျကို ဖို မ ခှဲ ခွားပွီး ရေးဆှဲေ လ့ရှိကွပါတယျ ပွိုငျပှဲဝငျ ဝတျဆငျထားေ သာဝတျစုံမှာ သူငယျတောျအက ကရာတှငျ ဝတျဆငျေ သာ ဝတျစုံပွညျ့ဖွစျပါသညျ။ ရှှလေကျကောကျ၊ ရှှခွေကေငြျး၊ ရှှဒေငျ်ဂါး ဆှဲကွိုးနှငျ့ကရဝိတျ ခွနေငျးတောျတို့ကို ဝတျဆငျထားပွီး ဆံပငျကို ဆံရစျဝိုငျး ဆံနှစျခှ ဂြိုစောငျးတှငျ စညျးထားပါသညျ၊၊
ပစ်တိုင်းထောင် အရုပ်လေးရဲ့ ထူးခြားချက်ကတော့ လဲကျသွားတိုင်း ပြန်လည်ထောင်မတ်နိုင်သလို ဘယ်လို အခြေအနေမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ချက်ချင်း ပြန်လည်ရုန်းထ နိုင်တဲ့ မြန်မာတို့ရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုကို ဖော်ဆောင် ရည်ညွှန်းချင်သောကြောင့် ယခုနှစ် Miss Universe Myanmar ရဲ့ အမျိုးသားဝတ်စုံအဖြစ် ဂုဏ်ယူစွာ ဖော်ပြတင်ဆက်လိုက်ပါတယ် ရှင် ” ဆိုပြီး ရှင်းပြလာခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာ့ရိုးရာ ဝတ်စုံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ သူင ယ်တော်ဝတ်စုံနဲ့ မြန်မာ့ရိုးရာ အရုပ် တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ပစ်တိုင်းထောင် လေးတို့ရဲ့ ပူးတွဲ တင်ဆက်မှုကို Miss Universe စင်မြင့်ထက်မှာ မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားအားလုံးက မြင်တွေ့ချင်ကြပါတယ်။ ဝတ်စုံအချိန်မီရောက်သွားပြီး မြန်မာတို့ရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ရိုးရာဓေ လ့တွေကို ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ ချပြနိုင်ဖို့လည်း အားလုံးကေမျှာ်လင့်နေကြပါတယ်။
Candy ရဲ့ကြိုးစားမှုကတော့ မျက်စိမှိတ်ပြီးယုံ ကြည်ရနိုင်တာမို့ ဝတ်စုံလေး အချိန်မီရောက် သွားပြီး ပွဲမှာအဆင်ပြေပြေနဲ့ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကို အကောင်းမွန် ဆုံးချပြနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ဖတ်ရှုပေးတဲ့ပရိတ်သတ်ကြီါ်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်…။
ယေန႕ မိုးၾကီးမယ့္ေဒသမ်ားႏွင့္ ေန႔စဥ္မိုးေလဝသသတင္း